Fahatakarana ny lanjan'i De Minimis - Jiro MediaLight Bias
Fahatakarana ny lanjan'i De Minimis
Inona ny sanda de minimis ary ahoana ny fiatraikany amin'ny saram-pandefasana iraisam-pirenena?
Ny sanda de minimis dia ny tokonam-baravarana izay tsy manafatra haba amin'ny haba na haba / VAT, ary samy hafa amin'ny firenena. Mety hisy fiatraikany amin'ny fandefasana entana any an-toerana izany satria ny saram-pandoavana (ny sarany izay aloanay mba hananana lisitry ny haba sy haba mialoha ny FedEx) dia vao miditra raha mihoatra ny sandan'ny de minimis.
Ny saram-bola aloa aloa dia 10 $. Tsy ampitanay aminao izany fiampangana izany. Noho izany, raha mahita sarany fandefasana izay misy haba sy haba ianao, dia tianay ho fantatrareo fa ny sandany tena izy dia $ 10 ambony noho izay aloanao.
Ireo firenena izay mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana ary mampiasa ny Euro ho vola dia samy manana ny tokonam-baravarana de minimis.
Ny adidy sy ny VAT dia tsy manan-kery raha hatramin'ny 22 EUR.
Ny VAT fa ny adidy kosa dia tombana raha eo anelanelan'ny 22 sy 150 EUR.
Ny adidy sy ny VAT dia voatery mihoatra ny 150 EUR.
Any Etazonia, ny hetra dia hetra ary tsy andoavan-ketra noho ny $ 800 USD de minimis malala-tanana. Avy eo, misy firenena hafa izay ny de minimis dia tsy mahitsy araka ny fisehoany, toy ny Aostralia A $ 1,000 de minimis. Ny minisitry ny Australia dia $ 1,000 amin'ny lafiny teknika; na izany aza, raha mivarotra mihoatra ny $ 75,000 isan-taona any Aostralia ianao dia takiana ny fisoratana anarana / famoahana ny GST fa tsy amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fadin-tseranana. Ny tokonam-baravaran'ny de minimis an'i Russia dia manokana ho an'ny mpanafatra tsirairay ao Russia, satria hatramin'ny 31 kilao sy hatramin'ny 1,000 EUR isam-bolana ihany no azony alaina.
Ny ankamaroan'ny firenena mpanafatra dia manana haba de minimis amin'ny haba sy haba. Azonao atao ny manindry ny kisary sainam-pirenena boribory eo amin'ny haben'ny havia havia amin'ity pejin-tranonkala ity raha tianao ny mahita ny fiantraikan'ny sandan'ny kaomandy amin'ny haba sy haba.